Wararka Maanta: Isniin, Nov 22, 2021-Soomaalida xaafadda Islii oo aad uga horyimid hadal kasoo yeeray senator katirsan aqalka sare Kenya
Xildhibaan Yuusuf ayaa sheegay in isaga iyo dadweynaha xaafadda Islii ay isugu soo baxeen sidii ay u cambaarayn lahaayeen hadalka kasoo yeeray senatorka aqalka sare, una muujin lahaayeen in dadka ku nool xaafadda Islii ay yihiin dadka nabada jecel.
“Waxaan ka codsanay ninkaas Senatorka ah inuu raalli galin si degdeg ah uga bixiyo hadalkaas beenta ah ee uu ka sheegay xaafadda Islii,” ayuu yiri xidlhibaan Yuusuf Xasan Cabdi, oo wareysi siiyanayay idaacadda BBC.
Xildhibaan Yuusuf waxa uu sheegay warkan laga sheegay xaafadda Islii in ujeedada laga leeyahay ay tahay in lagu curyaamiyo ganacsiga iyo horumarka ka socda Islii, laguna shaabadeeyo Soomaalida halkaas ku nool in ay yihiin dadka nabada carqalad ku ah.
“Berrigii hore ee reer Islii inta la cambaareeyo cagta la marin jiray, waanu kasoo gudubnay. Islii siyaasiyiin bay leedahay, madax bay leedahay. Dadka Soomaalidu kama aamusayaan, dulmina ma oggola, in lagu tuntana ma oggola,” ayuu hadalkiisa raaciyay xildhibaanku.
Wuxuu sheegay barlamaanka Kenya in ay u gudbin doonaan codsi ah ku aadan in Senatorkan wax laga weydiiyo arrinta uu xaafadda Islii ka sheegay ee ah in hub lagu iibiyo iyo sababta uu ku caddeynayo arrintaas.